Porn သုံးစွဲသူများအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်သတင်းများ - အင်တာနက်စွဲလမ်းစေခြင်း ဦး နှောက် (၂၀၁၁) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ဖြစ်သည်
UPDATE: အတော်များများကလေ့လာမှုများဤဆောင်းပါးတွင်ရေးသားခဲ့ကတည်းကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။ ဒီကိုကြည့်ပါ အင်တာနက်နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းစာရင်း ဦးနှောက်ကို လေ့လာရေး.
ဂိမ်းရောဂါမူကြမ်းအတွက်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ် ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11) ၏ 11th တည်းဖြတ်မူ
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲ၊ ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် porn စွဲများအတွက်သင့်လျော်သော: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ "(2018)
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အန္တရာယ်ကင်းကြောင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းခံရသောမည်သူမဆိုအတွက်ခေါင်းစီးသတင်းများဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားသည် avid အင်တာနက်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသူများ၏ ဦး နှောက်တွင်ပေါ်နေသည်။ ထို့အပြင်အွန်လိုင်း erotica ကိုအသုံးပြုခြင်းလည်းရှိသည် compulsive ဖြစ်လာဘို့ သာ. ကြီးမြတ်အလားအလာ ဒတ်ခ်ျသုတေသီများအဆိုအရအွန်လိုင်းဂိမ်းထက်။
NIDA ခေါင်းကို Nora Volkow, MD နှင့်သူမ၏အဖွဲ့သည်အဆိုအရ, ဤသုံးပါးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို စွဲသတ်မှတ်: desensitization (ဦး နှောက်ရဲ့အပျြောအပါးတုံ့ပြန်မှု၏နံပါတ်), sensitization နှင့် hypofrontality ။ ဒီလိုမျိုး ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲတွေ (အခုအင်တာနက်စွဲနေသူတွေမှာပေါ်လာတဲ့) လည်းပေါ်လာတယ် ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု။
ဥပမာအားဖြင့်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုသည် ဦး နှောက်၏အကျိုးကိုတိုက်ဖျက်ရေးလမ်းကြောင်းကို dopamine ဖြင့်လွှမ်းမိုးသည်။ အာရုံကြောဆဲလ်များသည် dopamine အားတုန့်ပြန်မှုအားလျော့နည်းစေခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုနည်းသည်ထက်နည်းသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်အသုံးပြုသူအချို့သည်“ ပိတ်ထားသည်” ခံစားရသည်။desensitization) ။ သူတို့ကပိုပြီးပြင်းထန်ဆွ (သည်းခံစိတ်) တပ်မက်ခြင်း, လျစ်လျူရှုအကျိုးစီးပွား, လှုံ့ဆော်မှု, သူတို့မှတခါအရေးကြီးသောခဲ့အပြုအမူတွေလေ့ရှိပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့၏ ဦး နှောက်ကကိုကင်းသုံးစွဲမှုသည်ကောင်းမွန်သည်ဟုခံစားခဲ့ရကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသဖြင့်၎င်းတို့သည်ကိုကင်းနှင့်သူတို့နှင့်ဆက်နွယ်သည့်အရာတိုင်းတွင်အလွန်အမင်းအာရုံခံစားမှုကြီးထွားလာသည်။ အဖြူရောင်အမှုန့်၊ “ ဆီးနှင်း” ဟူသောစကားလုံးသည်သူတို့ဆေးလိပ်သောက်ခဲ့သည့်ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်သူတို့နှင့်အတူသူငယ်ချင်းများအားလုံးသည်ဆုချီးမြှင့်သော circuit တွင်မြင့်မားသော dopamine ဓာတ်ငွေ့များကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးသူတို့ကိုအသုံးပြုရန်မောင်းနှင်သည် (ာင်း) ။ ဒါ့အပြင် ΔFosB, ပြင်းထန်သောမှတ်ဥာဏ်ကိုထိန်းသိမ်းကူညီပေးသည်နှင့် relapse အားပေးအားမြှောက်မယ့်ပရိုတိန်း, key ကိုဦးနှောက်ဒေသများတွင်စုပုံနိုင်သည်။ စကားမစပ်, ΔFosBလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူထ။ (ΔFosB Synaptic ဆက်သွယ်ရေးပြောင်းလဲပစ်မည်မှာသေချာမျိုးဗီဇမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကြောင်း, တစ်ဦးကူးယူအချက်ဖြစ်ပါတယ်)
အကယ်၍ ကိုကင်းအလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုဆက်လက်ဖြစ်ပွားပါကဆုိုင်ရာနယ်မြေ၏ desensitization သည်၎င်းတို့၏ ဦး နှောက်၏တိုကျရိုကျသောအမြှေးမြားနှငျ့သကျဆိုငျသညျ့လုပျငနျးကိုလျော့ကျစေသညျ။ အခုတော့အသုံးပြုသူတွေရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့အသံရွေးချယ်မှုတွေကိုလုပ်ဖို့စွမ်းရည်တွေအားနည်းလာပြီးသူတို့ရဲ့ frontal cortex ကကျုံ့သွားစေနိုင်တယ် (hypofrontality) ။ အတူတူယူ, မတရားသောသုံးစွဲဖို့မှတ်သားအပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု, နှင့်အန္တရာယ်ပြုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်လောင်စာစွဲ၏သံသရာလျော့နည်းသွားသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုသည်အသစ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွမ်းကျင်သူများသည်ယနေ့အလွန်ပြင်းထန်သောသဘာဝဆုကျေးဇူးများသည် ဦး နှောက်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည်။ “ သဘာဝဆုများ” သည်ငါတို့ဘိုးဘေးများ၏ရှင်သန်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့၏ဗီဇရှင်သန်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဆွဲဆောင်သောလှုပ်ရှားမှုများ / အရာများဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်ယခင်ကရှိခဲ့သောရောဂါများနှင့်လူနည်းစုသာမဟုတ်၊ ပုံမှန်, ကျန်းမာတဲ့ ဦး နှောက်လည်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အသက် ၃၇ နှစ်ရှိကျန်းမာသန်စွမ်းသူတစ် ဦး က“ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်မှာအွန်လိုင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကြည့်တဲ့အခါမှာငါဟာစိုက်ထူမှုမရှိဘဲအော်ဂဇင်ရတော့မယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဒါကကျွန်တော့်အပေါ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သလဲ။
ဒီတော့ဝေး, ဒီမှာကဒီမှာရမှတ်။ (ဦး နှောက်မှစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုသည်အဓိကစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုသုံးခု၏နောက်ဆုံးသက်သေအထောက်အထားကိုဖွင့်သောအခါရက်စွဲများကဖော်ပြသည်။ )
ရောဂါဗေဒလောင်းကစား - 10 နှစ်ကြာလေ့လာခဲ့ပြီးလာမည့် DSM-5 တွင်စွဲလမ်းမှုအဖြစ်ထည့်သွင်းထားသည် (၂၀၁၀)
အစားအသောက်စွဲ - (၂၀၁၀)
အင်တာနက်ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲခြင်း - (၂၀၁၁)
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲ - ဆဲ ဦးနှောက် Scan ဖတ်ကနေတဆင့်လေ့လာခဲ့မရ
စကားမစပ်, အင်တာနက်ကိုစွဲလေ့လာမှုများဂိမ်းကစားခြင်း, မညစ်ညမ်းစေရန်စွဲဖြေရှင်းရန်အကြောင်းပြချက်, သူတို့က porn ဆိုက်များ access ကိုပိတ်ဆို့ကြောင်းနိုင်ငံများ၌ပြစ်မှားမိခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်နှစ်နှင့်ချီ။ ရှိခဲ့သည် (China, 2006 and Korea, 2007) ။ အခြားတိုင်းပြည်များနှင့်မတူဘဲ၊ သူတို့သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများစွာမရှိကြပါ။
ဒီနေရာတွင် (ပဲ, ဇွန်လ 2011 အတွက်ဖြန့်ချိနှစ်ခု) သည်အင်တာနက်စွဲ၏ဦးနှောက်ထဲတွင်သုံးအရေးပါ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုဖေါ်ပြခြင်းလေ့လာမှုများနေသောခေါင်းစဉ်:
Numbed အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု: striatal D2 dopamine receptors တစ်လျှော့ချရေးအကျိုးကို circuitry ၏ desensitization များအတွက်အဓိကအမှတ်အသား, ရှိသမျှစှဲတဲ့အမာခံများဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုမှာအင်တာနက်စွဲနှင့်မပါဘဲယောက်ျား၏ PET Scan ဖတ်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။
Striatal Dopamine D2 receptor ကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်အတူပြည်သူ့အတွက်လျှော့ချ (2011)
သုတေသနတိုးပွားလာခြင်းကအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုသည် dopaminergic ဦး နှောက်စနစ်၏ပုံမှန်မဟုတ်သောအမှုများနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုရှိသူများသည် dopamine D2 receptor ရရှိနိုင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
အသိ: ဤလေ့လာမှု၌, ကောလိပ်ကျောင်းသားများကို6ပတ်အင်တာနက်ကဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခဲ့ပါတယ်။ ဆောင်ရွက်ချက်များမီနှင့်အပြီးပြုမိခဲ့သည်။ အမြင့်ဆုံးတပ်နှင့်အတူသူများသည်ဘာသာရပ်များလည်းအစောပိုင်းစွဲဖြစ်စဉ်ကိုညွှန်ပြကြောင်း၎င်းတို့၏ဦးနှောက်ထဲမှာအများဆုံးအပြောင်းအလဲများရှိခဲ့သည်။ တစ်လျော့နည်းလှုံ့ဆော်ဂိမ်းကစားသောထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုသည်နောက်ထိုကဲ့သို့သောဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများရှိခဲ့သည်။
ဗွီဒီယိုဂိမ်း Play ကိုအတူ Cue သွေးဆောင် Prefrontal Cortex လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်အပြောင်းအလဲများ (2010)
"တိုးချဲ့ထားသောဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းဖြင့်တိုကျို - ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးလှုပ်ရှားမှုတွင်ဤပြောင်းလဲမှုသည်စွဲလမ်းမှုအစောပိုင်းကာလများ၌တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအလားတူဖြစ်လိမ့်မည်။ ”
Hypofrontality: ဒီလေ့လာမှုမှာသုတေသီအင်တာနက်စွဲနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက်တိုကျရိုကျ cortex မီးခိုးရောင်အမှု၌တစ်ဦး 10-20% လျှော့ချရေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခြားအစှဲအပေါ်သုတေသနပြီးသားတိုကျရိုကျ-ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးမီးခိုးရောင်အမှု၌လျော့ကျမြဲမြံစွာတည်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အကျိုးဆက်များကိုကြိုမြင်နိုင်ဖို့စွမ်းရည်နှစ်မျိုးလုံးကိုလျှော့ချလည်ပတ်ခဲ့သည်။
အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါနှင့်အတူပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက် Microstructure ပုံမှန်မဟုတ်သော။ (2011)
အတော်အတန်မရင့်သောသိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုရှိခြင်းသည် [မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်] အားနည်းခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်းအချိန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တရုတ်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားတွင်စိတ်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာတစ်ခုအနေဖြင့်အင်တာနက်စွဲရောဂါ (IAD) သည်လက်ရှိတွင် ပို၍ လေးနက်လာသည်။ တရုတ်မြို့ပြလူငယ်များအကြားအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှုန်းသည် ၁၄% ခန့်ရှိသည်။ ... ဒီရလဒ်တွေကအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာနဲ့အမျှ ဦး နှောက်ကျုံ့သွားခြင်းကပိုလေးနက်တယ်ဆိုတာပြသခဲ့သည်။ (ဒါ့အပြင်ဒီကိုကြည့်ပါ) အစောပိုင်းကတရုတ်လေ့လာမှု.)
အွန်လိုင်း porn နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားနှိုင်းယှဉ်နည်းလမ်းတွေထဲမှာဦးနှောက်ကိုလှုံ့ဆော်
အဲဒီနှစျခုကိုးကားနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ porn စွဲနှင့်အရာဂိမ်းစွဲလမ်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဘယ်လဲ?
ကျွန်မတို့ကလိင်ဆက်ဆံတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ နေ့ချင်းညဒါမှမဟုတ်အတူတူဘာမှမသွားဘူး ငါကဒါကိုမယူလို့မရလို့အရမ်းအပြစ်ရှိတယ် ကျွန်မတို့လက်ထပ်ပြီး ၂ ပတ်အကြာမှာသူ့ကိုကွာရှင်းဖို့ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တယ်။
ကျနော့်သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ကသူတို့မှာပြaနာရှိတယ်ဆိုတာသိခဲ့ကြပေမယ့် ၂ ယောက်ကသူတို့ကနုတ်ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောကြတယ်။ *
အင်တာနက်က porn နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားနိုင်အောင်လူကြိုက်များအောင်သောလက္ခဏာများအဆိုပါများမှာ တူညီတဲ့ နှစ်ဦးစလုံးအချို့ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine dysregulate မှပါဝါပေးသောဝိသေသလက္ခဏာများ။ သစ်ခြင်း နဲ့ 'မျှော်လင့်ချက်များဖောက်ဖျက်ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှု'နှစ် ဦး စလုံး dopamine ကိုထုတ်လွှတ်လိုက်ပြီး ဦး နှောက်ကိုလှုပ်ရှားမှုကအဲဒါထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်လို့သတင်းပို့ပါတယ်။ အောင်မြင်သောဗွီဒီယိုဂိမ်းများသည်အသစ်အဆန်းနှင့်အံ့အားသင့်စရာနှစ်မျိုးလုံးကိုလျင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမျိုးဆက်ဂိမ်းများကိုဤအမှု၌နောက်ဆုံးထက်ကျော်လွန်။
ယနေ့ porn သည်နှစ်မျိုးစလုံးကိုကယ်တင်သည်၊ အဆုံးမသတ်သေးသည့်အသစ်အဆန်းရှိသည်နှင့်နောက်ထပ်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုရှိသေးသည်။ ပြီးပြည့်စုံသောရိုက်ချက်အတွက်“ အမဲလိုက်ခြင်း” မှထုတ်ပြန်သော dopamine လည်းရှိသည်။ အသစ်, ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်အမဲလိုက်အသုံးပြုသူရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုစုပ်ယူ သူတို့ dopamine အဆင့်ဆင့်မြှင့်ကြောင့်။ ပြင်းထန်သောအာရုံစူးစိုက်မှုသည်အသုံးပြုသူများအားသူတို့၏သဘာဝကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုယန္တရားများကိုပယ်ဖျက်ရန်နှင့်မကြာခဏ၎င်းတို့၏ ဦး နှောက်အားပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အားထုတ်မှုများစွာပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ စွဲသည်“ ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာသင်ယူမှု” ဖြစ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံအွန်လိုင်းဂိမ်းများကို“ adrenaline junkies” ဟုခေါ်ကြသည်။ သို့သော် adrenaline (adrenal glands တွင်ထုတ်လွှတ်သည်) သည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ Adrenaline မဟုတ်သည့် Dopamine သည်စွဲလမ်းမှုအားလုံး၏ဗဟိုချက်ဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်ထဲမှထုတ်လွှတ်သည့်အာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းများဖြစ်သော (norepinephrine) ကြောင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ခြင်းတို့သည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်များကိုမြင့်မားစေသည်။ အကွောငျး သူတို့အားဖြစ်စဉ်များ။
လှောင်ပြောင်စစ်ဆင်ရေးနှင့်အန္တရာယ်များသောရှာပုံတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတို့အဘို့အမြင့်မားသော ဦး စားပေးခဲ့ကြသည်သံသယရှိကြသည်။ ထိုကြောင့်ကစားခြင်းသည်ချိတ်ဆက်ရန်လုံလောက်သောရလဒ်ကိုရရှိသည်။ သို့တိုင် များပြားအောင်လုပ်ခြင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇရဲ့ထိပ်တန်း ဦး စားပေးဖြစ်ပါတယ်။ အစားအစာကဲ့သို့ပင်လိင်သည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမြင့်မားအရေးပါတယ်လို့အစားအစာစားသုံး၏ဒြပ်စင်ပေါင်းစပ် နှင့် ဗီဒီယိုဂိမ်းရဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်နှိုးဆ။ Junk food ကဲ့သို့အင်တာနက် erotica သည်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်တန်ဖိုးထားရန်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည့်အလွန်အကျွံပြုသည့်ပုံစံဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ eotica ကိုအလျင်အမြန်ကူးစက်ပျံ့နှံ့စေသည့်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ စွဲ၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ် ဦး ကနှစ်ဆ whammy ။
ဦး နှောက်သုတေသီများသည်အစားအစာနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာသိရှိခဲ့ရာများကိုသုံးသပ်သင့်သည်။ ကြွက်များသည်ကော်ဖီဆိုင်များမှအကန့်အသတ်ဖြင့်သာအစားအစာကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရရှိသောအခါ၎င်းတို့အားလုံးနီးပါးသည် D2 (dopamine) receptors (numbed pleasure response) လျင်မြန်စွာကျဆင်းလာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အဝလွန်ခြင်းမှ binged။ အဆိုပါ D2-receptor တစ်စက်ပုံမှနို့တိုက်သတ္တဝါများလှုံ့ဆျော တတ်နိုင်သမျှဖမ်းပြီး အဆိုပါရယူနေစဉ်ကောင်းသော-ရှိမရှိ High-ကယ်လိုရီအစားအစာများတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိမိန်းမဆောင်သည်။
မကြာသေးမီအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကာလအတွင်းအကန့်အသတ်မဲ့ကော်ဖီဆိုင်အမျိုးအစားအစားအစာကိုလှုံ့ဆော်မှုသည်ပုံမှန်မဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။ ထို့ကြောင့်အကန့်အသတ်မရှိသောအစာကိုမစားနိုင်ခြင်းသည်ကြွက်များနှင့်လူသားများအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ရာနှင့်ချီသောပူပြင်းလှသောဝတ္ထုမိတ်ဆွေများထံအလွယ်တကူနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာကွဲလွဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောလိပ်ကျောင်းသား ၁၀ ယောက်တွင် ၉ ယောက်မှာရှိပြီးသားဖြစ်သည် အင်တာနက်က porn ကို အသုံးပြု. လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်က။ အန္တရာယ်များ၎င်း၏မွေးရာပါစွဲပေးတော်မူ၏။ ဒါ့အပြင် Reversible လုပ်။ မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းအရှုံးမပေးတဲ့အခါသူတို့သတင်းပို့ အသက်ရှည်သမျှရှုထောင့်ကနေတိုးမြှင့်အပျော်အပါး (မကြာခဏစိတ်ဆင်းရဲပြီးနောက် ဆုတ်ခွာ).
နောက်ကျောအစားအစာဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ဦးနှောက်သုတေသီများလည်း overeaters ၏ဦးနှောက်အတွက်အားလုံးသုံး key ကိုစွဲဖြစ်စဉ်များ၏သက်သေအထောက်အထားများကိုတက်လှည့်ပြီ
Numbed အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု: တစ်ဦးက 2010 လေ့လာမှု အလွန်အကျွံစားခြင်းကအနာဂတ်တွင်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာနိုင်သည့်အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေပြီးဆုချခြင်းအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုပြသခဲ့သည်။ ၆ လကြာပြီးနောက် ပို၍ ပျော်စရာကောင်းသောအစားအစာများကိုစားသုံးသူများ၏ ဦး နှောက် (ဆူဆူညံညံပိုမိုများပြားခြင်း) သည်အခြားသူများထက်အပျော်အပါးကိုတုန့်ပြန်မှုနည်းသည်။
အသိ: တစ်ဦးက 2011 လေ့လာမှု အစားအစာစွဲစာမေးပွဲ (အစားအစာပုံများကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်စေခြင်း) တွင်မြင့်မားသောရမှတ်များကမူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏မူးယစ်ဆေးဝါးအပေါ်တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆင်တူကြောင်း ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှုကိုပြသည်။
Hypofrontality: တစ်ဦးက 2006 လေ့လာမှု အဝလွန်သူများသည်အရသာ၊ ချုပ်တည်းခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်တို့နှင့်ဆက်စပ်သည့်ဒေသများတွင် ဦး နှောက်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်မှုများရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်လေ့လာမှုအရ ဦး နှောက်သည်အလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းမှပြောင်းလဲခြင်းကိုအတည်ပြုသည်နှင့်အမျှအလွန်အကျွံစားခြင်းကဤအပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှတဆင့် overstimulation အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အဆိုအရဇီဝဖြစ်စဉ်မူမမှန်မှုကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောလူသားမြားသညျ (အမေရိကန်များ၏ 30% အဝလွန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ခန့်သာ 10% အတွက်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်လျှင် ဒါဝိဒ်သည် Linden), ဘယ်လို Over-ဆွအလွန်အမင်းခေါ်ဆောင်သွားအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကနေတဆင့်ဦးနှောက်မပြောင်းနိုင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်? အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု / ဘာဧကန်အမှန်အစားအစာသွေးဆောင်ထက်မနည်းလှုံ့ဆော်ဖြစ်ပါတယ်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင်မှားယွင်းနေသည့်“ ဘုံအသိပညာ” ဥပမာများသည်သမိုင်းတွင်ရှိသည်။ မာဂျင်းကိုစဉ်းစားပါ။ လူတိုင်းကထောင့်ထက်သင့်အတွက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာသိတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများသည်ဤအချက်ကိုအလွန်ယုံကြည်မှုရှိခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်မှုမပြုခဲ့ဘဲမာဂျင်းကိုထောပတ်အစားထိုးရန်ပုံမှန်အားပေးခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူများကမာဂျများ၏ကျန်းမာရေးကိုစမ်းသပ်ပြုလေ၏။ ဒါဟာ (မာဂျတှငျတှေ့) Trans-ဖက်တီးအက်ဆစ်ဟာအကြားဖြစ်ကြောင်းထွက်လှည့် အန္တရာယ်အရှိဆုံး အဆီ။ သူတို့ကထောပတ်ထက်လူသားများအဘို့ဝေးပိုဆိုးဖြစ်ကြသည်။
ဝေဖန်သူများကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်ရှင်းလင်းစွာပြုလုပ်သောကြောင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည် ဦး နှောက်တွင်စွဲခြင်းဖြစ်စဉ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုအကြံပြုခြင်းသည်သိပ္ပံပညာနှင့်မကိုက်ညီဟုဆိုနိုင်သည်။ တကယ်တော့ပြောင်းပြန်ကိုအကြံပြုရန်သိပ္ပံပညာအရမဟုတ်ပါ။ အားလုံး အပြုအမူများ (လောင်းကစား၊ အစားအစာ၊ ဗွီဒီယိုဂိမ်းများ) အပါအ ၀ င်စွဲလမ်းမှုသည် hypofrontality (atrophy နှင့် impulse control) မရှိခြင်းကိုပြသည်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ယခုဝေဖန်သူများကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်စည်းမျဉ်းမှချွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြသသည့်ခိုင်လုံသောသိပ္ပံဆိုင်ရာအထောက်အထားဖြစ်သည်။ ၎င်း၏စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကသံသယရှိနေဆဲဟုအကြံပြုရန်မှာသိပ္ပံပညာနှင့်မကိုက်ညီပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် porn အသုံးပြုရန်အတွက်အခြား ဦး နှောက်ပတ်လမ်းများရှိရန်လိုသည်။
လိင်ကျန်းမာဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဘေးကင်းလုံခြုံသောယူဆချက် ပို. ပို. လောကမှာဖြစ်ပါတယ်။
* ပထမဦးဆုံးအမှာစကားဂိမ်းစွဲလမ်း, porn စွဲအကြောင်းကိုဒုတိယအကြိမ်အကြောင်းကိုဖြစ်ကြသည်။